» जिम्मेवारी निभाएको हुँ, पद मागेर अमेरिका जान खोजेको होइनः डा. खतिवडा जिम्मेवारी निभाएको हुँ, पद मागेर अमेरिका जान खोजेको होइनः डा. खतिवडा – हाम्रो खबर
जिम्मेवारी निभाएको हुँ, पद मागेर अमेरिका जान खोजेको होइनः डा. खतिवडा
काठमाडौं,कार्तिक २७ । गत भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरे ।
एमसीसीका विषयमा उठेका प्रश्नहरुमा भने उनले अब पहिलेको भन्दा अलि फरक भूमिका हुने बताए । अर्थमन्त्री हुँदा आफूले पारित गर्न प्रयास गरेको बताएका उनले अब भने पहिलेकै जस्तो अवस्था नहुने बताए । पहिले आफैले गरेपनि अब भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ आफूले त्योमात्रै गर्नसक्ने बताए । एमसीसीका प्रतिनिधिहरू भने अहिले पनि आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेको भन्दै उनले केहि अस्पष्ट विषयमा छलफल हुने बताए । अनलाइन खबर बाट